Guddigii doorashooyinka ee dhawaan loo diiday inay ka dhoofaan Muqdisho oo maanta dhoofay. – Radio Daljir
Guddigii doorashooyinka ee dhawaan loo diiday inay ka dhoofaan Muqdisho oo maanta dhoofay.
Muqdisho, May, 11 – Guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka Somaliya oo maalintii Isniinta loo diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka duulay garoonkaasi, iaygoo ku sii jeeda magaalada Nayroobi ee dalka Kenya oo ay awalba u socdeen.
Afhayeenka guddigaasi Xil. Xareed Xasan Cali ayaa isagoo ku sugan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho u sheegay idaacadda Daljir in xubnaha maanta dhoofaya ay yihiin xubnihii dhawaan loo diiday inay ka baxaan gagidaasi.
Md. Xareed oo ka hadlay waxa is badalay ee maanta loo fasaxay ayaa sheegay in arrintaasi ay markii horeba ahayd mid sharci darro ayna la xisaabtami doonaan kuwii geystay marka ay soo noqdaan afar beri ka dib.
Arrintaan ayaa ceeb iyo waji gabax ku ah wasaaradda arrimaha gudaha oo uu ka soo baxay amarka xildhibaanada lagu xayiray maalintii Isniinta.